२५ सय भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले भाँडा फाल्दै कोठाबाट निकाले, सडकमा धरधरी रुदै’ पिडित(भिडियो)
April 20, 2020 1105
केहि समय अगाडी सरका’रले घरधनीलाई १ महिनाको घरभा’डा मिनाह गर्न आग्रह गरेको थियो । लकडाउन लागेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइ रसको रोक’थामका लागि प्रभावित भाडा’मा बस्ने’हरुलाई सहयोग गर्न भन्दै सो निर्णय गरेको थियो ।
घरबेटीले यसरी मिनाह गरेको घरभा’डाको प्रमाणको आधारमा सर’कारले घरवाहल कर नलिने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए’का थिए । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी मान्छेहरु घर भाडा लिएर बस्छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले श’हरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र साना व्यवसायीहरूलाई एक महि’नाको घर भाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गर्‍यो । तर, अधिकांश घरबेटीह’रुले भने सर’कारको आग्र’हलाई स्वी’कार्ने छाँट’काँट देखाएका छैनन् ।
बरु कतिपय घरबे’टीले कोरोना सर्छ भन्दै भाडा’वाललाई कोठामा नबस्न दबाव दिन थाले’का छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गने वर्ग ब’सोबास गरिरहेका घरका घरबेटीले सरकारको आग्रह’लाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् ।
डेरावालह’रुले यस्तो विषम परिस्थितिमा घरबे’टीले न्यूनतम् मानवीय सम्वेदना पनि नदेखाएको भन्दै ‘अनुरोध गर्ने’ भन्ने सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ‘भाडा छुटको कुरा आएपछि घरेबटीहरु’ले मुन्टो बटार्ने अवस्था छ ।
सरका’रले भाडा छुटको व्यवस्था’लाई स्थानीय तहको सहयोग लिएर कार्यान्वायन गर्नुपर्ने डेरावा’लहरुको माग छ । धेरै घरेब’टीले ऋण लिएर घर बनाएको तर्क गरेर भाडा छुट गर्ने विषयलाई बेवा’स्ता गरिरहेको कतिपए बताउछन् ।
यसैवीच, कतिपय डेरा’वालहरु संकट’को वीचमा पनि अत्या’वश्यक काम’मा निस्केर घरमा फर्कँदा घरबेटीले विरोध गर्ने गरेको र लकडाउ’नका बेला घरमा नबस्न दबा’व दिने गरेका सूचना’हरु आउन थालेका छन् । भाडामा लिएको कार्याल’यभित्रै बसेर काम गर्न पनि घरबेटी’बाट अवरोध हुने गरेको कतिपयको गुनासो छ ।
यसै क्रममा करिब १५ दिन भयो नबिन गुरुङ र श्री गुरुङ’लाई घरबेटीले निका’ल्दिएको । लकडा’उनको बेला सबै घर गए, उनी’हरुको घर स्याङजा रहेछ तर घर जाने पैसा पनि नभएको र त्यही बेला दुई महिनाको घरभाडा घरबेटीले मागेपछि तिर्न सकेनन् ।
महिनाको २५ सयका दरले दुई महिना’को पाँच हजार नतिरेपछि घरबेटीले घरबाट निकालेको र आफूहरु अल’पत्रमा परेको नबिन गुरुङ बताउँछन् । १५ दिनसम्म उनीहरुले पृथ्वीचोक, नदीपुर लगा’यतका ठाउँहरुमा सडकमै मागेर पकाएर खाए ।
प्रहरीले बेला बेला’मा आएर जान भने पनि कसैले केही सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । आईतबार भने पोखरा महानगर’पालिकाले १२ किलो चामल एक किलो नुन र दुई किलो दाल दिएको छ ।
यद्यपी उनीहरुले पाएको सा’माग्री कसरी पकाएर खान्छन् त्यो भने महानगरसंग जवाफ छैन । हेर्नुहास् यो भि’डियो:
Prevलक डाउन तोड्दै १ लाख बढी मानिस मुस्लिम धर्मगुरुको अन्त्ये’ष्टिमा सहभागी
Nextबिदेशमा बस्ने नेपालीलाई समस्या भए यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्
आज कुन जिल्लामा कति जना कोरोना संक्रमित थपिए ? हेर्नु`होस् (जिल्लागत विवरण)
सडकमै अर्जुन र श्रीमतीबीच बच्चा खोसाखोस, दुई जनाबीच यस्तो चर्काचर्की (भिडियो सहित)
पत्रकार बलराम बानियाँलाई यसरी बगायो पानीले [भिडियो हेर्नुहोस्]